Ucinga ntoni ngee-Rankings ze-ESPN ze-Famous Boxers?
Ngubani ngokwenene umbhokisi omkhulu kunabo bonke? Lo mbuzo ufanele ubeke umxoxiswano phakathi kwebalandeli bempi. Emuva ngo-2007, i-ESPN.com ibonise i-boxers yabo enkulu kakhulu ye-50. Injongo yabo yayingekho 'ixesha lonke, inqanaba lesigqirha-for-pound ranking' ukuze uthethe, kodwa kunoko luvavanyo oluchanekileyo olusekelwe kwiimfuno ezine:
Khangela uluhlu olupheleleyo ngezantsi.
Akumangalisi ukuba ngubani ophezulu kwoluhlu. Ukuba uyamkela ukuba uSuar Ray Robinson usele slot top (okanye nokuba awukho), ucinga ukuba ungubani kwinani lembini?
50 Ibhokisi Eyona Mkhulu Kakhulu
1. Ushukela uRay Robinson
3. UHelm Armstrong
4. Joe Joe
5. UWillie Pep
6. URoberto Duran
7. uBenny Leonard
8. UJack Johnson
9. UJack Dempsey
11. UJoe Gans
12. Ushukela uRayard Leonard
13. UHarry Greb
14. I- Rocky Marciano
15. UJimmy Wilde
16. I-Gene Tunney
18. U-Archie Moore
19. UStanley Ketchel
20. iGeorge Foreman
21. UTony Canzoneri
22. UBarney Ross
23. UJimmy McLarnin
24. UJulio Cesar Chavez
25. UMarcel Cerdan
27. uEzzard uCharles
30. UTerry McGovern
31. UBilly Conn
32. UJoseph Napoles
33. URuben Olivares
34. uEmile Griffith
35. UMarvin Hagler
37. UTomas Hearns
38. ULarry Holmes
39. U- Oscar De La Hoya
40. uEvander Holyfield
42. uAlexis Arguello
43. UMarco Antonio Barrera
44. uPernell Whitaker
45. UCarlos Monzon
47. UBernard Hopkins
49. uErik Morales
50. UMike Tyson
Uluhlu lweeNkcazo zeeNgcaciso zezona zinto ziza kukhangelwa njani namhlanje?
Uluhlu lwe-ESPN.com lwahlanganiswa ngo-2007. Ngelo xesha, uManny Pacquiao wayengakaze alwe - kwaye wabethwa - uMarco Antonio Barrera, uMnumzana uMarquez uMarquez (u-reatch), uDavid Diaz, u-Oscar De La Hoya, uRicky Hatton noMiguel Cotto.
Ukuba uluhlu luhlanganisiwe namhlanje, iPacman ngokuqinisekileyo uyayichitha i-50 ephezulu. Umbuzo othakazelisayo ngowona mgangatho ophakamileyo oza kuba nawo phakathi kwama-greats onke?
Kwakhona, u-Floyd Mayweather akazange afikelele kwi-49-0 yakhe ephawulekayo kwaye wabetha umlwane wakhe omkhulu, uManny Pacquiao. Ngokuqinisekileyo kuya kubonakala ukuba kuthunyelwe uMeweweather ngokugqithiseleyo olu luhlu oluvela kwi-48 ukuya ngokuqinisekileyo ngaphakathi kwelishumi eziphezulu, ukuba alukho ngaphezulu kwamanye abantu amehlo.
Mhlawumbi enye yeengxaki zokugxekwa kweloluhlu, ukuthetha iminyaka embalwa kamva, kukungabikho kwe-Wales 'super-middleightight and light-heavyweight yokulwa noJoe Calzaghe. NjengoMeweweather, uCalzaghe wahlala kunye nomhlala phantsi engenabala, kodwa wabetha ama-greats aseMerika uBernard Hopkins noRoy Jones Jr ngaphambi kokuba baxhamle iiglavu.
Lawa ngamanye amadoda ayenokuba aphakamileyo phezulu kwoluhlu kunokuba abekwe ngo-2007 ngumnatha wenethiwekhi omkhulu wehlabathi, i-ESPN.
Ucinga ntoni ngoluhlu? Yintoni oyitshintshayo? Ngubani osele? Ngubani ongenawo?
Ngaba i-Davy Crockett yafa kwiMfazwe e-Alamo?
Iimpawu eziphambili zeMiphakathi yasendulo - Inkxalabo ekubi kakhulu
I-Great Blizzard ka-1888
I-Rhetoric kunye ne-Commonplace